यहाँ र त्यहाँ हामी वाक्यांश "बेल्टको लागि बन्द।" वाक्यांशको अर्थ आज हाम्रो ध्यानको फोकस हुनेछ। हामी यसको उत्पत्ति र अर्थ विश्लेषण गर्नेछौं।
वाक्यांशको मूलको धेरै संस्करणहरू छन्। तिनीहरू एकसाथ भेला हुन्छन् कि ती सबै मानिसहरूको जीवनमा जडित हुन्छन्। मान निकै नै ठिक छैन। पाठक आफैले यसको अर्थ अनुमान गर्न सक्दछ। अहिलेसम्म, कामदारहरूले उपकरणहरू जमघट गरिरहेका छन् जुन अझ आवश्यक पर्दैन, तर तिनीहरू चाँडै आवश्यक पर्दछ। यसैले अभिव्यक्ति "बेल्टको लागि बन्द।" वाक्यांश को अर्थ को "व्याख्या छोडेर वा केहि तरिका मा पार" को रूप मा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
अर्को सम्मोहन यो हो कि रूसमा त्यहाँ यस्तो मज्जा थियो - बेल्टमा कुश्ती। जाहिर छ, यो आधुनिक सिम्बो को पूर्वज हो। युवाहरूले लडाकु र जिते। सायद, तिनीहरूले पुरस्कार जितेका पुरस्कारहरू, उनीहरूले सफलताको प्रतीकको रूपमा बेल्टको लागि जुटिकाली पनि गरे। तर यो सम्भव छ कि यो आन्दोलनले "बेल्टको लागि बन्द" वाक्यांशलाई जीवन प्रदान गर्यो (वाक्यांशको अर्थ एक दिनको रूपमा स्पष्ट हुन्छ)।
अघिल्लो खण्डबाट, अभिव्यक्तिको अर्थ "बेल्टको लागि बन्द" बुझ्न योग्य छ। यद्यपि, हामी केहि उदाहरणहरू दिन्छन्। जस्तो देखिन्छ जस्तो लाग्छ, जब हाम्रो देश "चार वर्षमा पाँच वर्षको योजना" वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हातहतियारको व्यवस्था गर्दछ, हाम्रो शासकहरूबाट हालै भन्दा कम परिमार्जन (दिमागमा तुरुन्तै एनएस ख्रुश्चेभ आउनुहुन्छ) सँग बैठकहरू र बैठकहरूमा सुन्न सकिन्छ। मानिसहरूसँग बेल्टको बारेमा केही कुरा छन्। उदाहरणका लागि: "हामी बेल्टको लागि बन्द गर्न सक्षम भयौं ( वाक्यांशको अर्थ बिना स्पष्टीकरणका लागि स्पष्ट थियो ), संयुक्त राज्य अमरीका!" जनता थोरै थियो।
वा कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै बिरुवामा महिना वा वर्षका कामदारहरूको उत्सव हो। निर्देशक उठ्छ र यसो भन्छ: "सिडोरोभ एक अद्भुत कार्यकर्ता र एक राम्रो साथी हो!" "किन त्यो धेरै राम्रो छ?" सिडोरोभको शोषणको बारेमा केहि थाहा छैन जुन अन्य बोर्डका सदस्यहरूलाई सोध्नुहोस्। निर्देशक उनलाई घुमाउँछ र यसो भन्छ: "कसरी, तपाईलाई थाहा छैन कि प्रसिद्ध Comrade Sidorov?" त्यो छ महिना अगाडी बढावा योजना को लागि नैतिक रूप देखि अधिक शक्तिशाली हो र बेल्ट को बंद गर्न को लागि ( वाक्यांश को अर्थ को बारे मा संधै नै छ, तिमी देख सकते हो जस्तै ) Comrade Petrov! के यो मामला होइन, यो योग्य छैन? "
हो, "त्यहाँ हाम्रो समयमा मानिसहरू थिए, न कि वर्तमान जनजाति।" सोभियत अवधिमा, त्यहाँ नेताहरू थिए जसले आफ्नो सम्पूर्ण हृदय आफ्नो कारणले गर्दा देशको कारण दिए। यद्यपि, हामी विचलित छौं।
वाक्यांशको आधुनिक जीवन
अब, जब धेरै बिरुवाहरू र स्टकवानोभाइटहरू विगतमा बाँकी छन्, उत्पादन उपलब्धिहरूको बारेमा कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। तर जीव विज्ञान जीवित र रूसी भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूले सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिन्छ। समाजमा अझै पनि प्रतिस्पर्धा छ, र यदि त्यहि, वाक्यांश "जश्न जम्मू" (वाक्यांश को अर्थ - "केहि मा कसैलाई पार गर्न") स्वस्थ हुनेछ र बिर्सनु हुँदैन।
यदि कुनै व्यक्तिले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैन भने, त्यसपछि उसले आफूलाई आफूलाई बेल्टमा प्लग गर्नुपर्छ - यो विकासको लागि अयोग्य अवस्था हो। एफ एफ नैटिस्ले यसो भने: "एक मानिस केहि छ जुन पार गर्नु पर्छ।"
शब्द संयोजनमा शब्दहरूको जडान। शब्दहरू जडान गर्ने तरिका
Otymennye adjectives - हिज्जे
अंग्रेजीमा कति पटक
एक लेखक को हो? लेख कसरी लेखिएको छ? शब्द "लेखक" को अर्थ
दोस्रो वर्ग ढुवानी। फाइदा र नोकसान
असामान्य मरुभूमि बिरुवाहरु: Calligonum। वर्णन, प्रयोग
मादक पेय को ताप सामग्री, र आहार यसको समावेश
Gelatin एक जेली कसरी खाना पकाउनु? केही सरल सुझाव
रगतमा Norma चीनी
Kristina Bazan र यसको सफलताको कथा
दाँत मा पत्थर
कुकुर लागि Brewer गरेको खमीर: समीक्षा